Qaadashada Suuqal-Fadeexo oo Dagaal ka Dhax Abuuray Qurba joog – Rasaasa News
Qaadashada Suuqal-Fadeexo oo Dagaal ka Dhax Abuuray Qurba joog
Jijiga, July 8, 2014 – Suuq ugu wayn magaalada Qabridare ee lagu magacaabo Suuqal-fadeexo, oo ay isku laayeen Quroba joog reer Qabridahare ah.
Wararka ka imanaya magaalada Qabridahare, ayaa sheegaya in dad Qurba joog ah ku dagaalameen anaa qaadan iyo qaadan maysid Suuqal-fadeexo.
Qurba joog muddo saddex sano ah joogay magaalada Qabridahare oo sida la sheegay haatan ah suuq-dilaal dhulka banaan, ayaa waxay dhul aan jirin ka iibiyeen dad Qurba joog ah.
Dilaaliintu waxay dhawr sanoba kaga qadhaabanayeen Qurba joogta maqan, in ay hayaan dhul wayn oo ku yaal badhtamaha magaalada, kaas oo ay leeyihiin saraakiil Tigree ah, iyaga oo dadka u sheegay in saraakiishu iibinayaan dhulka. Sababta ay saraakiishu dhulka isaga iibinaayaan ayaa lagu sheegay in ay doonayaan lacag ay ku dhamaystiraan dhismayaal guryo qabyo ka ah oo ku yaal Maqale [Mekelle].
Qurba joogta, ayaa booskiiba laggaga qaatay lacag dhan shan kun oo doolar [US $5000], iyada oo aan la tusin wax sharci ah oo dhulku leeyahay iyo cida leh midna.
Qurba joogta u dhalatay degaanka Somalida Ogadeeniya ee booqda dalka, oo badankoodu ah dad reer miyi ah, ayaa ku qamaamaya qaadashada jagooyin. Iyaga oo aan hoos u eegin dhibaatooyinka iyo baahida haysata shacabka ee ay sababeen ciidamada Atoobiya.
Dilaaliintan, ayaa lacago badan waxay ka qaateen dad Qurbojooga, dabadeedna guryo ku dhistay. Qurbojoogta oo marar kala duwan yimid magaalada, ayaa kuligood la tusay Suuqal-fadeexo, laguna yidhi “waaka dhulkii dhawaana dadka laga rari ruux walbana booskiisa ayaa loo goyn doonaa.
Xogtani waxay sheegtay in kolkii xafiiska dhulka ee Qabridahare dacwada la geeyey ay dilaaliintii Qurbojoogta ahayd ku doodeen in dhulka ay ka iibiyeen Qurba joogta cusub uu ku yaal Gomosholey.
Suuqal-fadeexo, waxaa loo yaqaan suuqa wayn ee Qabridahare, waxaana magacani baxay sanadkii 2008, ka dib kolkii uu hogaankii nabadgaliyada ee xiligaas uu suuqa ku dharbaaxay Imaamkii masaajidka Qabridahare, xili uu culimada ku canaanayey taageerada ONLF [Gamgame].
FG. Waanu ka gaabsanay in aanu sheegno magacyada arimo xaga amaanka ah.
Ethiopian approve US$9 billion state budget for 2014/15